Archive du 01-déc-2021
Tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra “Mihatra amin’ny fiainan’olona maro”
Tsy mahay maka lesona ny mpitondra ankehitriny, hoy ny kandida ho ben’ny tanànan’Antananarivo farany teo, Eliace Ralaiarimanana.
Samy mahatsikaritra ny maro fa mitotongana ankehitriny ny fiarahamonina Malagasy. Miha mitotongana hatrany aza satria efa an-taonany ihany izay nilazana teto
Leo fahatapahan-drano Raikitra indray ny grevy teny Ankatso I
Raikitra indray ny grevy sy fanakanan-dàlana teny Ankatso I omaly alina. Tezitra ireo mpianatra sy ny mponina noho ny tsy fisian-drano.
LTP Alarobia ≠ LTP GCM Mahamasina Ady sipa niitatra tamina vono sy fanafihana…
Nirohotra nivoaka ny sekoly LTP (Lycée Techique et Professionnel) Alarobia ireo mpianatra ao amin’ity Lisea teknika ity omaly talata 30 novambra 2021 tokony ho tamin’ny 9ora maraina,
Kianja Barea Tsy vita ny 7,99%-n’ny asa nifanarahana
Nifarana omaly 30 novambra 2021 ny fe-potoana fifanarahana eo amin’ny Fanjakana Malagasy sy ny orinasa Sinoa amin'ny fanamboarana ny kianja Barea.
Herisetra an-dalam-be Voasambotra ireo roalahy nidarok’olona teny Ambodimita
Niparitaka teny anivon'ny tambazotra facebook ny fihetsik'ireo roalahy nandaka ilay mpitondra moto sy namono ilay lehilahy saika hiaro ilay mpitondra moto tetsy Ambodimita Ambohimanarina,
Toekarena Tsy afa-po amin’ny tetibolam-panjakana 2022 ny GEM
Naneho ny fahadisoam-panantenany tamin’ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2022 na ny “PLFI 2022” ny Vondron’ny orinasa eto Madagasikara na ny GEM (Groupement des Entreprises de Madagascar).
Voka-dratsin’ny Covid 19 Nihena 13% ny harin-karen’ny Malagasy tsirairay
Tena niteraka voka-dratsy teo amin’ny asa fihariana tokoa ny fandalovan’ny valan’aretina Covid 19 teto amintsika nanomboka tamin’ny taona 2020 no nankaty raha araka ny tatitry ny GEM
Sahiran-tsaina ny Malagasy Mirongatra ny fangoronan-tany ataon’ny Karana
Mirongatra izay tsy izy ny fifanolanana ara-tany amin’ny karana amin’izao Fitondrana Rajoelina izao. Maro ny fitakiana sy fananganana sora-baventy etsy sy eroa fa tsy homena ny karana ny tany.
Ratrema William “Mbola tena ilaina ny boky, sarobidy ny haren-tsaina entiny”
Mbola tena ilaina ny boky na inona na inona fivoaran’ny teknolojia ankehitriny noho ny hasarobidin’ny haren-tsaina ao anatiny entiny eo amin’ny asa fanabeazana.
Trafika tao Antalaha Lavanila 11 lasaka sy jirofo 50kg sarona
Tratran’ny zandary tao Ambinany, Antalaha, ny sambo haingam-pandeha mitondra lavanila efa voakarakara 11 lasaka sy jirofo 50 kilao amin'ny andro alina afak’omaly 29 novambra,
Vokatra vita Malagasy Mivoatra ny fankafizan’ny mpanjifa azy
Isan’ireo nandray anjara tamin’ny hetsika fampirantiana vita Malagasy “Kanton’I Gasikara” tetsy amin’ny zaridainan’Antaninarenina omaly ireo mpanao asa tanana avy ao amin’ny faritra Atsimo Atsinanana.
Handeha hitoroka depiote sy ben’ny tanàna Navotsotra ireo fokonolona 3 nosamborina tao Bekily
“Vaovao vao voaraiko amin'izao avy any Bekily: nosamborin'ny Capitaine de la Gendarmerie, Commandant de Compagnie-n’i Bekily ny Solontenan'ny Mponina avy ao amin'ny Kaominina Tanambao Tsirandragne Distrikan’i Bekily,
Betafo Zaza 07 taona naolan'ny raikeliny
Zazavavy kely vao 07 taona monja no naolan’ny Raikeliny tany Betafo, Faritra Vakinankaratra. Raha araka ny fantatra dia 25 taona ity Raikely nahavanon-doza ity.
Hetsika fanangonam-boky 29. 392 no voaangona tao anatin’ny 3 herinandro
Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly Talata tetsy amin'ny Plaza Ampefiloha ny fihaonam-be manodidina ny boky andiany faharoa nokarakarain'ny Minisiteran'ny Fanabeazam-Pirenena tamin'ny alalan'ny
Famaranana ny taona Ho etsy Manerinerina i Njakatiana
Hanolotra hira kanto maro ny lehilahy amin’io fotoana, raha ny fanazavana,
Zaimaika Analakely Madio sy mamiratra aloha hatreto
Tena madio ny fivarotana. Ireo mpivarotra manana ny ankanjo manokana sady mitovy daholo. Madio tsara ny toerana ary tsy ahitana fako sy vary masaka milatsadatsaka mihitsy eny amin'ny tany na potiny kely aza.